अष्ट्रेलियाकाे जंगलमा लागेकाे डडेलाेले दिलाएकाे क्षतिप्रति गहिराे दुखानुभूति - Vishwa News
अष्ट्रेलियाकाे जंगलमा लागेकाे डडेलाेले दिलाएकाे क्षतिप्रति गहिराे दुखानुभूति
२३ पुष २०७६, बुधबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
सुपेन्द्र बस्नेत / बोष्टन
सृष्टिकाे भरपुर ब्याख्या गर्ने सबैभन्दा पुरानाे दस्तावेज हाे – धर्मशास्त्र । अनि मानव सभ्यता बिकासकाे जग , मेरुदण्ड र ऐतिहासिक धराेहर पनि मानिन्छ, धर्मशास्रलाई । चाहे त्याे जुनसुकै धर्म किन नहाेस् । जसले मानवलाई प्राणी जगतमा सर्वाेकृष्ट, चेतनशील, बुद्धिमानी, पराेपकारी प्राणी र प्राणी जीवन चक्रकाे सबैभन्दा उत्तम चाेला हाे भनेर ब्याख्या गर्दछ । यसलाई केही हदसम्म बिज्ञानले पनि स्विकार गरेकाे छ ।त्यसैले भनिन्छ कि मनुष्य चाेला पाउनुमा गर्व गर्नु पर्दछ। समाज र धर्मशास्त्रले घाेटी घाेटी अजम्मरी बुटी भए झैं यस्तै शिक्षा दिलाएर धेरथाेर दिक्षीत पारेकाे पात्रहरु मध्यकै एक पात्र हुँ म पनि । तर समाजमा घटेका केही घटनाहरुले कहिले काही प्राप्त दिक्षाप्रति नै संका उब्जाउदछ र बर्गेल्ती प्रश्नहरु जन्माउदछ । अनि भगवानप्रतिकाे आस्था, विस्वास र आड भराेसा डगमगाउन पुग्दछ । जाे यतिखेर मैले अनुभूति गरिरहेकाे छु । यधपी यही र उस्तै परिवेसमा रहेर भगवानप्रतिकाे आस्था,विश्वास र आडभराेसामा तत्काल पारपाचुके गरेकाे फैसला गरेर पुर्णबिराम लगाई हाल्ने आँट भने अझै जुटिसकेकाे छैन । अस्ट्रेलियाकाे जंगलमा त्यही सर्वाेकृष्ट मानिएकाे मानिसकै कारण लागेकाे डडेलाेले लाखाैं निरथत्था प्राणीकाे ज्यान गएकाे छ र ज्यान जाने क्रम अझै जारी नै छ । आखिर हामीले सुनेकाे र बुझेकाे झै सबै तजबिजीकाे हकदार भगवान हाे भने कसैकाे पनि भलाे नहुने यस्ताे अप्रीय घटना किन घटाइयाे वा घटी सकेपछि पनि किन राेकिएन ? प्राकृतिक नियम अनुसार नै बाँची रहेका जीवजन्तुहरुकाे अकालमा किन ज्यान लिइयाे ? मानवले मानवता किन गुमाउदै छ ? खाेई त भगवान ? यी र यस्ता प्रश्नहरुबाट म अनुत्तरित छु । कतैबाट टालटुले जवाफ पाइए पनि धार्मिक शास्त्रकै परिधि भित्र रहेर यथाेचित चित्तबुझ्दाे जवाफ दिन धुरन्धर धार्मिक ब्याख्याकारहरुलाई पनि निकै ठुलाे संकट परेकाे छ।
मानिस स्वभावैले र सामाजिक परिवेशले हरपल सुख प्राप्तिका लागि भाैंतारी रहन्छ । तर ऊ मानसिक भन्दा पनि भाैतिक सुखमा केन्द्रित रहन्छ । भाैतिक सुख प्राप्त भए पछि मात्र मानसिक सुख प्राप्ति हुन्छ र यही सुखकाे उत्कर्षमा आनन्दानुभूति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा आम मानिस विश्वास गर्दछन् । जाे आनन्दमय जीवनयापन गर्ने भ्रमित मार्ग हाे भन्ने मलाई लाग्दैछ। त्यही जिन्दगीकाे अन्तिम लक्ष्य ‘आनन्दमय जीवन’का खातिर एक पछि अर्काे गरी उब्जिएका सुखकाे मृगतृष्णा मेटाउने लालसामा मानिस जानी नजानी बिनासकारी कदम चाल्न पुग्दछ। जसले गर्दा ढिलाे चाँडाे ऊ पनि समाप्त हुन्छ र अरुलाई पनि समाप्त पार्दछ । यी र यस्ता निन्दनीय कार्यहरुका कारण मानव चाेलाप्रति ढुक्क भएर गर्व गर्ने आँट आउदैन ।
त्यसकाे ज्वलन्त उदाहरण बनेकाे छ यतिबेला अष्ट्रेलियाकाे जंगलमा लागेकाे डडेलाे । सन् २०२० काे प्रारम्भसंगै बिश्वकै लागि अत्यन्तै दुःखदायी घटनाका रुपमा चित्रण भैरहेकाे याे अकल्पनीय घटनाले अष्ट्रेलियाले त महासंकट ब्यहाेर्नु परिरहेकाे छ नै । यसकाे अलावा यसले बिश्व पर्यावरणमा पनि ठुलाे प्रभाव पार्ने निश्चत् नै छ । जाे सम्पूर्ण सृष्टिका लागि घातक शिद्ध हुने नै छ । अर्काे तिर एक नेपाली भएकाे हैसियतले देशकाे हितार्थ साेच्नु पर्दा देशले ठुलाे संख्यामा विदेशीहरुलाई नेपाल भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएकाे ”नेपाल भ्रमण बर्ष २०२०” पनि प्रभावित हुनेमा कुनै संका छैन । जाे सफल पार्नमा अष्ट्रेलियाकाे भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ भन्नेमा दुई मत छैन । अष्ट्रेलियासंगकाे सुमधुर दाैत्यसम्बन्ध, त्यहाँ रहेका नेपालीहरुकाे संख्या, भ्रमण बर्ष प्रभावकारी बनाउन हुदै गरेका गतिविधिहरु लगायतले पनि यसलाई पुष्टी गर्दछ ।
सञ्चार माध्यमहरुले जनाए अनुसार गत सेप्टेम्बर ,२०१९ मा जंगल फडानी गरेर खेतीयाेग्य जमीन बिस्तार गर्ने क्रममा असावधानीपूर्ण तरिकाले लगाइएकाे आगाे समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा ५९ लाख हेक्टर जमीनलाई प्रभावित पारेकाे डडेलाेले हालसम्म २३ जनाकाे मृत्यु, झण्डै ५० कराेड बन्यजन्तुकाे बिनास, दुई हजार ६ सय बढी घर र कयाै प्रजाति बनस्पति नष्ट भै सकेका छन्। जाे क्रम अझै जारी नै छ ।याे बिश्कै लागि अत्यन्तै दु:खदायी र अपूर्णीय क्षति हाे ।सार्वजनिक भएका याे घटनासंग सम्बन्धित तस्विरहरु अत्यन्तै हृदयविदारक र करुणादायी रहेका छन् । मानवताकाे नाताले जाे काेहीलाई यस्ता तस्विरहरुले पिडाबाेध गराउनु स्वभाविक नै हाे । जसबाट म पनि अछुताे रहन सकिन । यसबाट बिश्वले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।
यति मात्र हैन एउटा नेपालीकाे नाताले ”जुन देशमा लाखाै नेपालीहरु सुन्दर र उज्वल भविश्यकाे खाेजिमा भाैतारी रहेका छन् ,जहाँ जान नेपालीहरु प्राथमिकताका साथ लालाहीत भै रहेका छन् र जसकाे भूमिका नेपाल र नेपालीकाे उज्वल भविश्यका लागि महत्वपूर्ण छ” त्यही ठाँऊमा घटेकाे अप्रिय घटना भएका कारण पनि तुलनात्मक रुपमा आत्मीयपनले बढी चासाे र चिन्ता लागेर दुःखी र पिडाबाेध गराएकाे छ । जाे स्वभाविक पनि हाे ।याे अकल्पनीय दुःखद घडिमा पिडादायी घटनाप्रति गहिराे दु:खानुभूति प्रकट गर्दै असामयिक दिवङ्गत मानव तथा बन्यजन्तुकाे आत्माकाे चीर शान्तिकाे कामना सहित हार्दिक श्रध्दाञ्जलि अर्पण गर्दछु ! साथै याे विपतमा जुट्ने सबैलाई हृदयदेखि नै छड्के सलाम गर्दै घाइतेहरु (मानव तथा बन्यजन्तु ) काे सिघ्र स्वास्थ्यलाभकाे कामना सहित यथासिघ्र संकट माेचनका लागि भगवानसंग प्रार्थना गर्दछु !
सिस्नेरीले मेटाउला ललितपुरवासीको तिर्खा ?